American Gods (2017) Season2Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
TMDb: 7.1/10 1011 votes
Original nameAmerican Gods
Created byBryan Fuller, Michael Green
StarringBruce Langley, Emily Browning, Ian McShane, Ricky Whittle, Yetide Badaki
Synopsis of American Gods (2017) Season2Complete
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ရှဲဒိုးမှနျးဆိုတဲ့ လူတဈယောကျဟာ ထောငျထဲက ထှကျလာပွီး မိနျးမဆီကို ပွနျမယျ့နမှေ့ာပဲ ထူးဆနျးတဲ့
လူကွီးတဈဦးနဲ့ လဆေိပျမှာ စတှခေဲ့ပါတယျ။အဲဒီလူကွီးဟာ သူ့ဘဝအကွောငျးကို ထူးထူးဆနျးဆနျးသိနပွေီး သူ့ကို အလုပျလုပျဖို့ကမျးလှမျးခဲ့ပါတယျ။ ရှဲဒိုးမှနျးနဲ့ ဘယျသူဘယျဝါမှနျးမသိတဲ့ လူကွီးတို့ အတူခရီးထှကျရငျး ရှဲဒိုးမှနျးတဈယောကျ
သူမသိတဲ့ ကမ်ဘာကွီးထဲက ထူးဆနျးမှုမြိုးစုံနဲ့ ကွုံလာရတဲ့အခါ….
ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Tracy ဖွဈပါတယျ
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရှဲဒိုးမွန်းဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ထောင်ထဲက ထွက်လာပြီး မိန်းမဆီကို ပြန်မယ့်နေ့မှာပဲ ထူးဆန်းတဲ့
လူကြီးတစ်ဦးနဲ့ လေဆိပ်မှာ စတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလူကြီးဟာ သူ့ဘဝအကြောင်းကို ထူးထူးဆန်းဆန်းသိနေပြီး သူ့ကို အလုပ်လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ရှဲဒိုးမွန်းနဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိတဲ့ လူကြီးတို့ အတူခရီးထွက်ရင်း ရှဲဒိုးမွန်းတစ်ယောက်
သူမသိတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲက ထူးဆန်းမှုမျိုးစုံနဲ့ ကြုံလာရတဲ့အခါ….
ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Tracy ဖြစ်ပါတယ်
FuckCoup , Server M-File
Share.PW , Yuu Drive
ProductionFremantleMedia North America
Firt air date2017-04-30
Last air date2021-03-21
Home PageAmerican Gods (2017) Season2Complete
Ghost Whisperer (2005) Season 1 Complete
L.U.C.A.: The Beginning (2021) Complete
Missing: The Other Side (2020) Complete
My ID is Gangnam Beauty (2018) Complete
Hannibal (2013) Season 1 Complete
The Umbrella Academy (2019) Season2Complete
Pennyworth (Season 1) Complete